उपत्यकामा ११ लाख सवारी साधन, यस्तो छ जाम नहट्नुको कारण ...
काठमाडौं, २१ पुस — नेपालमा पछिल्लो समय सवारी साधनको संख्या तीव्र गतिमा बढेको छ । तर सडक सुधार भने कछुवाको गतिमा भइरहेको छ । यसैको परिणाम दिनहुँ सवारी जामको चर्को समस्या भोग्न बाध्य छन् राजधानीवासी । अझ कार्यालय समयको त कुरै नगरौं । भनेको समयमा गन्तव्यमा पुग्नुभयो भने तपाईंले अालूलाई भाग्यमानी ठाने हुन्छ ।
किन बढ्यो त सडकमा सवारी जाम ? महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख डिआइजी प्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘सडकमा जाम बढ्नुको मुख्य कारण सडक कम र सवारी साधनको चाप बढी हो ।’
पछिल्लो २० वर्षमा झण्डै ९ लाख सवारी वृद्धि
यातायात व्यवस्था कार्यालय, वाग्मतीको तथ्याङ्क अनुसार २०६५ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा मोटरसाइकलको संख्या तीन लाख हाराहारीमा थियो । तर २०७३ मा आइपुग्दा यो संख्या बढेर नौ लाख पुगेको छ ।
यसलाई हेर्दा आठ वर्षको अवधिमा तीन सय प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । २०५१ सालमा उपत्यकाभित्र ७८ हजार सवारी साधन दर्ता भएका थिए ।
बीस वर्षको अन्तरालमा राजधानीमा गुड्ने सवारी साधानको सङ्ख्या झन्डै दुईसयभन्दा बढी प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय, वाग्मतीमा मात्र ९ लाख ५० हजार १ सय गाडी दर्ता भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म कति दर्ता भए उपत्यकामा सवारी ?
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वाग्मतीमा १० हजार ३ सय ७९ बस दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, मिनीबस ९ हजार ५ सय ७५, ट्रक तथा मिनीट्रक २० हजार ८ सय ४७ दर्ता भएका छन् ।
विभागको तथ्यांक अनुसार मोटरसाइकल ७ लाख ७० हजार दर्ता भएका छन् । कार, जीप र भ्यानको संख्या १ लाख २५ हजार ४ सय ३९ रहेको छ । त्यस्तै क्रेन तथा एक्स्क्याभेटर ४ हजार ८ सय ७७ , पिकअप १७ हजार १ सय ७० रहेको विभागको तथ्यांकमा रहेका छन् ।
यसबाहेक राजधानीमा चीनमा निर्मित ब्याट्रीबाट चल्ने स्कूटरमात्र करीब पाँच हजार छन् । त्यस्तै साइकलको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
१६ सय किलोमिटर सडकमा ११ लाख गाडी
सडक विभागका अनुसार, राजधानीमा १ हजार ५ सय ९४ किलोमिटर सडक छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार वाग्मतीमा ९ लाख ५० हजार १ सय ७८ गाडी दर्ता भएका छन् ।
यसबाहेक बाहिर दर्ता भएका सवारी पनि राजधानीमा गुड्छन् । महाशाखा प्रमुख डिआइजी प्रकाश अर्यालका अनुसार अहिले उपत्यकामा ११ लाख हाराहारीमा सवारी साधन छन् । सडक अनुपातमा यो संख्या एकदमै धेरै हो ।
सडक विस्तार नहुने तर सवारी साधनको संख्या दिनदिनै थप हुनेक्रमले सडकमा जाम बढेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख एआइजी प्रतापसिंह थापा बताउँछन् ।
राजधानीमा दैनिक कुद्छन् साढे ६ लाख सवारी साधन
काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ६ लाखभन्दा धेरै सवारीसाधन गुड्ने गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार वाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएका साढे ९ लाखमध्ये अधिकांश उपत्यकाभित्रै चल्छन् ।
विभागका उपमहानिर्देशक वसन्त अधिकारीका अनुसार दर्ता भएकामध्ये ७० प्रतिशत सवारीसाधन दिनको एकपटक सडकमा निस्कन्छन् । यस आधारमा उपत्यकाभित्रका सडकमा मात्रै दैनिक ६ लाख ४६ हजार ३० सवारीसाधन गुड्ने गरेको विभागको अनुमान छ ।
यी हुन् उपत्यकामा अत्यधिक जाम हुने क्षेत्र
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार, राजधानीमा कोटेश्वर, नया“ बानेश्वर, गौशाला, चावहिल, कोटेश्वरदेखि कलंकी, कालिमाटी, त्रिपुरेश्वरबाट कालिमाटी, सिंहदरबार, थापाथली, पुतलीसडक क्षेत्रमा अधिक जाम हुने गरेको छ । अझ कतिपय स्थानमा सडक निर्माण जारी रहेकाले पनि जाम बढिरहेको छ ।
कसरी हुन्छ सवारी जाम समस्याको समाधान ?
महाशाखा प्रमुख डिआइजी अर्याल भन्छन्, ‘सडक जाम कम गर्न सडक निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कि त सवारी दर्तामा रोक लगाएर वैकल्पिक सवारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
सरकारले सवारी साधनको संख्या थप नगर्ने वा सडक विस्तारलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने अबको चार/पाँच बर्ष वर्षभित्र राजधानीमा गाडी सडकमा निकाल्न पनि समस्या हुने देखिएको छ ।
राजधानीका सडकका ओभरफ्लाई र सबवे रोडहरू नभएकाका कारण पनि समस्या बढेका छन् । बाटो क्रस हुँदा सवारी जाम हुने गरेको छ । त्यसका लागि सरकारी तवरबाट सडक व्यवस्थापन प्राथमिकतामा रहनु आवश्यक छ । पुस २१, २०७३ मा प्रकाशित
भावुक हुँदै धुर्मुसले भने–बाढीपीडितको अवस्था म भन्नै सक्दिनँ !